Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay canbaaraynaysaa xiyiraada Horyaal TV iyo Hadhwanaagnews, iyo xadhiga weriye Sayid | ToggaHerer
← Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Xafiiskiisa Ku Qaabiley Safiirka Ingiriiska U Qaabilsan Dalalka Somaliland Iyo Soomaaliya
Human Rights Centre condemns the closure of two media houses and detention of journalist →
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay canbaaraynaysaa xiyiraada Horyaal TV iyo Hadhwanaagnews, iyo xadhiga weriye Sayid
6, September 2019, Booliiska Somaliland waxay albaabada u laabeen xarunta telefishanka madaxabanaan ee Horyaal.Waxaa sidoo kale la xidhay mulkiilihii telefishanka, Maxamed Cismaan Mire “Sayid” 7dii September. Majirto sabab cad oo ilaa iyo hada boolisku usheegeen telefiishanka ay xidheen. Maalintii 5ta bisha Booliisku waxaay waraysi ka qaadeen weriye Sayid oo ay wax ka waydiiyeen barnaamij hordhiciisu ka baxay telefishanka oo ku saabsan haweenka qaadka cuna.
Sidoo kale 3, September 2019, Maxkamadda Gobolka Hargaysi, waxay amartay in la xayiro shabakada Hadhwanaagnews kadib markii ay daabacday warar sheegaya in Gudoomiyaha Baanka Dhexe Somaliland lala xidhiidhinayo eedo musuqmaasuq. Gudoomiyuhu wuu diiday eedahaas.
Telefishanka iyo website ka lamana siin fursad ay isku difaacaan. Xayiraadaha ay dowladdu saarto saxaafadu waa dhibaato xuquuqal insaan oo walaaceeda leh. Saxaafadda madaxbanaani waxay laf-dhabar u tahay horumarka umadda iyo dimoqraadiyadda .
Sida ku cad qodobka 32 ee dastuurka waxa mamnuuc ah dhamaan ficilada cabudhinaya saxaafadda. Xayiraada telefishanka Horyaal iyoHadhwanaagnews waxay xadgudub cad ku tahay xorriyadda saxaafadda iyo saraynta sharciga.
1. Inay xayiraadda ka qaado telefishanka Horyaal iyo Hadhwanaagnews, siina daysomulkiilaha TV ga Horyaal, Mohamed Osmaan Mire “Sayid” oo ay u ogolaato inay hawshooda wataan.
2. Inay joojiso cabudhaada joogtada ah ee ay ku hayso warbaahinta.